February 2013 - Page 3 of 31 - iftineducation.com
iftineducation.com – Maamulka KMG ee Magaalada Kismaayo ayaa shaaca ka qaaday in maalinta berito ah uu furmaya shirka looga hadlayo maamul usameynta Gobalada Jubbooyinka. Isaga oo warbaahinta kula hadlaye Magaalada Kismaayo afhayeenka maamulka KMG ee Magaalada Kismaayo C/naasir Seeraar Shirka maamul usameynta Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa maalinta beri ah oo 28-Bishan ah ka furmaya Kismaayo. Seeraar ayaa sheegay in meel…
R/Wasaare Saacid oo ka war bixiyay khilaaf la sheegay in uu kala dhexeeyo Madaxweynaha Soomaaliya.
iftineducation.com – R/wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid) ayaa todobaadyo kadib markii hawada uu isku sharreray hadal heynta khilaaf la sheegay in uu kala dhexeeyo Xassan Sheekh Maxamuud waxa uu ugu danbeyn ka hadlay arinkaasi isaga oo ku sheegay mid been abuur ah oo sal iyo raad toona aan laheyn. Sheyrdoon ayaa waxa uu taageray in uu dalka gudihiisa iska joogo…
M/weynaha Soomaaliya oo Guddoomay Aqoonsiga Shan Safiir
iftineducation.com – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta waraaqahooda aqoonsiga ka guddoomay safiirro cusub oo ay Soomaaliya u soo magacaabeen shan dal oo ka tirsan Midowga Yurub. Madaxweynaha oo Soo Dhaweynaya Safiirada Midowga Yurub Shantan safiir ayaa waxa ay kala yihiin Safiirka Jarmalka Margit Hellwig-Botte, Safiirka Faransiiska Etienne De Poncins, Safiirka Spain Javier Herrera Garcia Canturi, Safiirka Belgium Bart Ouvry…
Daawo Sawirada Lo’ Badan oo markab lagu saarayo qalab casri ah Mudo 23 Sano Kadib Dakada Magaalada Muqdisho iyo masuuliyiin ka qeyb gashay munaasabada furitaanka xoolaha nool ee laga dhoofinayo dekada Muqdisho.
iftineducation.com – Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ah wasiir ku xigeenka ganacsiga Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa xarigga kajaray dhoofinta xoolaha nool oo laga hir geliyay dekada weyn ee Magaalada Muqdisho kadib 22-sano oo fowda dalku soo maray. Kuxigeenka wasiirka ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in wasaarada uu ka shaqeeyo ay ku guulesatay in ay dekada weyn ee Muqdisho ka bilaawdo dhoofinta…
aadan21 / February 26, 2013
iftineducation.com – Dalka Jabuuti ayaa maanta looga dareeray goobaha cidbixinta, waxaana dadku dooranayaan 65 Xildhibaan ee golaha sharci-dejinta ee dalkaas. Doorashada waxaa ka qaybqaadanaya Saddex Xisbi oo laba kamid ah ay yihiin Mucaaradka halka kan kale yahay Xisbiga talada haya ee aan 10-kiis ano ee la soo dhaafey lagula tartamin Golaha Sharci Dejinta Jabuuti. UMP oo ah xisbiga talada haya ee…
Daawo Arin 22 Sano ka hor Ugu Dambeeyay Dekadda Muqdisho oo Lagu Arkay. “Maxeey Tahay Arintasi”
iftineducation.com – Dawo Muuqaalka Maanta aan idiin soo gudbineeyno waa Muuqaal ku saabsan arin farxad leh, oo marka aad daawato aad baad ugu farxi doontaa waana 22 sano ka hor arin ugu dambeeysay Dekada Muqdisho oo maanta lagu arkay. Dekedda Muqdisho, ayaa ahayd mid aan u shaqeyn sida dekedaha caalamiga ah, tan iyo bur burkii Dowladda dhexe, sidaa darteedna aysan kusoo…
Ciyaaryahankan Difaacid Gool Maxaa ka raacey (Funny Video)
iftineducation.com – Ciyaaryahan Reer Arjantiin ah ayaa Gool uu difaac islahaa waxaa ka raacey arin yaab leh oo Malaayiin qof ka qoslisiisay markii ay dhacdey ka dib. Fadlan Like Iyo Share si aad asXaabtada inTa internetka iStiCmaAsho ugu gudbiso Thanks ____________________________________ Wax Yar Akhri Wax Badan Ogoow iftineducation Media Network http://www.iftineducation.com iftineducationmedia@gmail.com
Arsenal Iyo Milan Oo Isku Haysta Soo Xero Gilinta Adil Rami
iftineducation.com – Kooxaha AC Milan iyo Arsenal ayaa ku dagaali doona Saxiixa Daafaca dambeedka Midig ee Valencia Sidaas waxaa soo warinaya Wargaysyada Ciyaaraha ka faalooda ee England. Daily Express ayaa sheegaya in kooxda Premier League ayaa ku doonayso €12million si ay ugu badasha Daafaceeda France ee Sagna. AC Milan ayaa xiisaynaysay daafaca reer France laakiin Arsenal ayaa ku cad cad helitaanka…
Xamdi: Wicitaankaaga Ayaa Ii Fiican In Uu Iga Kiciyo Halka Uu Alarm-ka Igu Qeylin Lahaa
iftineducation.com – Subax waliba waxa ay iigu bilaabataa qurux iyadoo ay ii sii raacsan tahay dhawaqaada macaan ee iiga imanayay wicitaanka telefoonka . Waana mid iigu wanaagsan ee aan kaga dugaashado garbahayga dhaxanta ku dhacaysay ee iiga imaanaysay banaanka hore waxa ayna ii tahay difaac . Teeda kale codkaaaga macaan ee isoo toosiyay sitayna qosolka iyo dhoola cadeynta waa midka labaad…
Wax Badan Ka Ogaaw Kulanka Barcelona Iyo Real Marid , Yaa Maqan Yaana Jooga?.
iftineducation.com – Ciyaaryahan oo Barcelona ka tirsan oo kala ah Carles Puyol, Sergio Busquets, Cesc Fabregas iyo Xavi ayaa dhamaantood ku soo laaban doona Line Up-ka Barcelona marka garoonkooda ay caawa ku soo dhaweynayaan Real Madrid. Ragan ayaa Todobaadkan meel loo dhigtay Real Madrid oo lug kala bax ay dhextaal. Daafaca Brazil ee Adriano ayaa dhaawac looga shaki qabaa inuu u…